grid စပါးရိတ်ရာကာလကို EA - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်grid စပါးရိတ်ရာကာလကို EA
ဤအများ၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် grid စပါးရိတ်ရာကာလကို EA! အပြည့်အဝဗားရှင်းတူညီမဟာဗျူဟာ, တစ်ခုတည်းသောန့်အသတ်ရာထူးများ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာပြင်ဆင်ချက်၏အားသာချက်ကိုယူပြီး (အော်တို mode ကိုပေါ်) စျေးကွက်ယိထဲကအများဆုံးရိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ထို့အပြင်လက်စွဲစာအုပ်ကုန်သွယ်အပေါ်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စနစ်၏ဒီလို 500 subscriber များအားပေးဆောင်ကျော်ရှိခြင်းအအောင်မြင်ဆုံးလူမှုရေးကုန်သည်များကအသုံးပြုနေပါသည်။
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုဒီအော်တိုမဟာဗျူဟာနှင့်အတူပေါင်းစပ်! ထိုသို့ဇယားကွက်များပါဝင်သည် GBPJPY အခြားငွေကြေးအပေါ်အလွယ်တကူအရွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမဟာဗျူဟာ grid စပါးရိတ်ရာကာလကို EA လည်းအရှုံး option ကိုရပ်တန့်ထောက်ခံပါတယ်။ သင်တဦးတည်းငွေပေးငွေယူအတွက်ကာကွယ်ပေးခံရဖို့ရှယ်ယာများ၏ရှယ်ယာ-based ရပ်တန့်အရှုံး setting ကိုရာခိုင်နှုန်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ပေါ်မှာစမ်းသပ် GBPJPY 06.2012 - ဆိုအချိန်အပိုင်းအခြားမှာ 11.2013 (တိုင်းကို tick) ။
အခြားအအားလုံးအတွက်: CHFJPY, EURJPY, CADJPY, USDJPY.
ဒါ့အပြင်ဥပမာ (ကရေပန်းစားစျေးကွက်နှင့်အတူအခြားမည်သည့်ငွေကြေးတစ်စုံအပေါ်စုံစမ်းစေနိုငျသညျ, GBPUSD 06.2013-11.2013) သို့မဟုတ်လှိုဈေးကွက်။ ပိုကောင်းတဲ့အပေါ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာဇယားကွက်သုံးပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်း GBPUSD နှင့်လှို mode မှာတစ်နေ့တာရဲ့လမ်းကြောင်းသစ်လျှင်မလိုက်နာပါ။ လှို mode မှာလှည့်ပတ် oscillate မှ 8-16 စရဖကိုအသုံးပြုပါ။
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး configure ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အားလုံးရွေးချယ်စရာအချို့ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူပြည့်စုံစေနိုင်သည်အရာကိုဥပမာတစ်ခုပေးကမ်းရှည်ဖော်ပြချက်ရှိသည်။
စာရင်းပေးသွင်းထားမှုများတန်ချိန်အတူအောင်မြင်သော signal ကိုပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်လာသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်တစ်ဦးလူသိများတဲ့စနစ်ဖြင့်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းပါစေ။
ဂျပန်က default facing နှင့် (သေးပါကအောင်မြင်မှုအာမမခံ) က၎င်း၏ငွေကြေး inflating ကြောင့် JPY အားလုံးအတွက် automated ကုန်သွယ်ဘို့ကောင်းပါတယ်။
အဆိုပါမဟာဗျူဟာ MetaTrader4နှင့် MetaTrader5နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းရှိပါတယ်။
အခမဲ့ Grid စပါးရိတ်ရာကာလကို EA Download
ရေဝဲ Trader PRO EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex Venture အောက်ခြေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း